Vaovao - Misy fomba maro hampivelarana orinasa
Ningbo ZODI manangana tranokala vaovao sy fampiroboroboana google hanitatra ny faritry ny orinasa.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia, maro ny teknolojia vaovao nipoitra. Malaza ihany koa ny fampianarana tambajotra noho ny olana ara-tsosialy. Ho fampisehoana an-tserasera, raha ny marina dia tsy manohana an'ity karazana fomba fandraharahana ity aho. Mazava ho azy, manana ny tombony ihany koa izy io. Ohatra, azonao atao ny mikaroka ny mpanjifa sy ny mpanjifa dia afaka mamela hafatra am-panontaniana, mba hahafahany mifampiresaka mora sy mivantana.
Betsaka ny fepetra takian'ireo mpanondrana alohan'ny tena hivarotany ny entam-barotra any ivelany izay ilana fiheverana manokana ny fametrahana fifandraisana ara-barotra amin'ireo mety ho mpanjifa. Amin'ny ankapobeny, ny mpanondrana dia afaka mahazo vaovao momba ny mpanjifa manantena any ivelany amin'ny alàlan'ireto fantsona manaraka ireto:
1. Banky ao amin'ny tanin'ny mpividy
2. Efi-trano vahiny
3. Consulat napetraka any ivelany
4. Fikambanam-barotra isan-karazany
5. Lisitry ny varotra
6. Gazety sy dokam-barotra
Rehefa nahazo ny anarana sy ny adiresin'ireo mpanjifa manantena izy, dia mety hanomboka handefa taratasy, boribory, katalaogy ary lisitry ny vidiny amin'ireo antoko voakasik'izany ny mpanondrana. Ny taratasy toy izany dia tokony hilaza amin'ny mpamaky ny fomba ahazoana ny anarany ary manome azy antsipiriany momba ny orinasan'ny mpanondrana, ohatra, ny isan'ireo entana ary ny isany.
Matetika dia ny mpanafatra no mametraka taratasy fangatahana toy izany amin'ny mpanondrana mba hikaroka fampahalalana momba ny vokatra tadiaviny. Raha izany dia tokony hovaliana haingana sy mazava ny taratasy mba hamoronana sitra-po ary hamela fahatsapana tsara ny mpamaky. Raha avy amin'ny mpanjifa mahazatra ny famotopotorana, valiny mivantana sy fahalalam-pomba, miaraka amin'ny fanehoana fisaorana, no ilaina rehetra. Fa raha mamaly fanontanina avy amina loharano vaovao ianao dia hanatona azy tsara kokoa. Ohatra, azonao atao ny manampy hevitra tsara momba ireo entana nanontaniana ary manintona ny saina amin'ny vokatra hafa mety hahaliana.